MuMupata WeVamwari: Vagadziri Vazivisa Kuti Inowanikwa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Nhau dzakanaka, Mumupata weVamwari ndechimwe chezvisikwa zvakamirirwa kwenguva refu zvakaziviswa panguva yeThe Game Awards. Ichauya mu2019 uye yakave yakasimbiswa kuti ichave iripo neLinux, kuwedzera Mac uye Windows kubva kuValve Steam chitoro. Mutambo wevhidhiyo uyo unovimbisa zvakawanda nemagiraidhi zvinoenderana neUnited Unjini 3D yatakataura nezvayo zvakanyanya pano. Asi izvo hazvisi izvo zvinonyanya kushamisa kana zvakanakisa izvo zita iri richaunzira isu ...
Kana iwe waifarira zita racho Firewatch, ipapo uchave uchifarira Mune Mupata weVamwari, mumwe mutambo wevhidhiyo uyo wabuda mune imwechete studio yakagadzira yekutanga, ndokuti, Munda Mutsvene. Iyo studio inoshanda nesimba pachirongwa ichi chakapetwa uye chakakosha, icho chichatitora isu kuburikidza nerwendo rwakasimba uye runonakidza kuburikidza negwenga reEjipitori sezvatinogona kuona muvhidhiyo iri kumusoro kwechinyorwa chino. Shanduko kubva musango reFirewatch kusvika iko zvino kupinda mumatongo ekare eEgypt. Hunhu hwako huchafanira kuwana hupfumi hutsva nekutsvaga nekugadzirisa matambudziko izvo zvichave zvinokumbirwa iwe, ndiko kuti, iwe uchave uri Indiana Jones ari pabasa, an archaeologist kana muongorori anoda kuwana zvakavanzika zvikuru kubva kare zveiyi tsika. Zvinosuruvarisa kuti hapana data rakawandisa kunze kweiyi, isu tinogona kungo wedzera kuti mutambo wevhidhiyo mumunhu wekutanga uye chete kune mumwe mutambi uye wakaiswa mugore ra1920.
Kana iwe uchida archeology, nhoroondo uye egypt yekareMirira kusvika 2019 yeichi chikuru chirongwa chakatimirira. Saka iwe unogona kupukunyuka kwenguva pfupi kubva muchokwadi uye kupinda mune shangu dzemuongorori uyu anoda mukurumbira uye hupfumi. Ichokwadi ndechekuti nhau pamusoro pemitambo mitsva yemavhidhiyo yeLinux haimire kusvika, nguva yega yega yemhando yepamusoro uye yakawandisa, dzimwe nguva kune akawanda zvekuti isu tinofanirwa kusefa chete akanakisa kuti tirege kufukidza ese LxA evhidhiyo mutambo wenhau. Saka… nhau huru!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » MuMupata weVamwari: Vagadziri Vanozivisa Inowanikwa yeLinux